KMF/Cnoe : “Tsy mavitrika ny mpifidy” | NewsMada
KMF/Cnoe : “Tsy mavitrika ny mpifidy”
“Mahamenatra fa mbola ambany ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy amin’ny fifidianana. Tsy nanao ny asany ve ny KMF/Cnoe sa sarotra antenina ny olona? Na mety ratsy ny fomba fanatonana nampiasaina tamin’ny fanentanana sy fanabeazana. Tsy fantatra”, hoy ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, teny Tsiadana, omaly. Noho izany, hamafisina ny fanabezana olom-pirenena momba ny fifidianana.
Mandresy lahatra ny mpifidy ny KMF/Cnoe, tsy hionona amin’ny fijerena ny lisi-pifidianana ao anatin’ny vanim-potoan’ny fifidianana, manomboka ny 1 desambra ka hatramin’ny 31 janoary. Mila manamarina ny iray trano ny mpifidy, raha tafiditra ao anaty lisi-pifidianana izany na tsia. Eo koa ny fanamarinana ny mombamomba ny tena rehetra amin’ny lisi-pifidianana, fa tsy ny anarana fotsiny.
“Hatraiza ny fahatsapan’ny mpisehatra tsirairay avy ny andraikiny amin’ny fampiharana ny fitsinjaram-pahefana?” Izay kosa no nezahina novalina tamin’ny atrikasa teny Tsiadana nandritra ny roa andro, nifarana omaly. Nandray anjara tamin’izany ny avy amin’ny kaominina filamatra folo toa an’i Mahavelona (Foul-point), ohatra, Mahanoro, Betafo, Tsararafa-Farafangana… Hita amin’izany ny olom-boafidy sy ny olom-boatendry miisa 85: ben’ny Tanàna sy mpanolotsain’ny Tanàna, lehiben’ny distrika, firaisamonina sivily, olom-pirenena tsotra…
Andrasana koa ny fananganana ny rafitra ifotony fikaonan-doha, hijerena ny laharam-pahamehana sy ny hetahetan’ny vahoaka ifotony amin’ny fampandrosoana. Misy ireo kaominina efa nanangana izany, ary milaza fa mbola azo hatsaraina.